Abbootiin qabeenyaa Paarkiiwwan industirii ijaarsarraa jiran barbaadaa jiru jedhame
Finfinnee: Naannoo Amaaraatti, Paarkii Industirii Agiroo-Piroosasiingii Bureefi Naannoo Sabaafi Sablammoota Ummatoota Kibbaatti Paarkiin Industirii Qonnaa Qindaa'aa Yirgaalam, abbootiin qabeenyaa hojii itti eegaluuf gaafachaa jiraachuu qondaaltonni naannolee lamaanii ibsan.
Geggeessaan Hojii Paarkii Industirii Agiroo Pirosasiingii Buree Obbo Daanyaachoo Asratsi, gaazexaa Bariisaaf galma miliniyemiitti ibsa kennaniin akka jedhanitti, ijaarsi Paarkii Agiroo-Industirii Buree bara 2009 kan eegale yoo ta'uu, ijaarsi boqonnaa jalqabaa paarkichaa saffisaan geggeeffamaa jira. Ijaarsa geggeeffamaa jiru cinaatti, abbootii qabeenyaa biyyaa keessaafi alaatti kireessuun isaanis hojiitti seenuuf haaldureewwan barbaachisaa xumuraa akka jiran eeraniiru. Waggoota lama keessatti xumurama jedhamee kan eegamu ijaarsi boqonnaa jalqabaa paarkichaa, waggaa ittaanu gara omishaatti ni seenama jedhamee kan abdatamu ta'uus ibsaniiru.
Ogeessa Bulchiinsa, Kilaastariifi Oppireeshinii Paarkotaa, Koorporeeshinii Misoomaa Industirii Paarkii Naannoo Saboota, Sablammootaafi Ummatootaa Kibbaa Obbo Asfawu Shallamaa ammoo, ijaarsa Paarkii Industirii Qonnaa Qindaa'aa Yirgaalam ilaalchisee ibsa nuuf kennaniin ijaarsi paarkichaa %50 ol darbuu himaniiru. Kun boqonnaa jalqabaatiin yoo ta'u, ijaarsisaa boqonnaa lammaffaatti ce'uu eeraniiru. Paarkichatti dameewwan filataman ja'arratti bobba'uun abbootiin qabeenyaa hojjechuu akka danda'aniitti ijaarsisaa saffisaan geggeeffamaa akka jiru ibsaniiru.
Akka ibsasaaniitti, abbootiin qabeenyaa biyya keessaafi alaa paarkichatti hojjechuuf gaafatan akka jiran himanii, isaanis yeroo muraasa booda hojii kan eegalan ta'uu dubbataniiru. Akka naanncihaaattii paarkiiwwan industirii afur ijaaruuf kan karoorfame yoo ta'u, qorannoon bu'a qabeessummaasaanii geggeeffamaa akka jirus himaniiru. Yeroo ammaa Paarkii Industirii Qonnaa Qindaa'aa Yirgaalam, xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachu eeraniiru.
Torban kana/This_Week 10581
Torban darbe/This_Month 96938
Guyyaa mara/All_Days 1435361